Nagu saabsan - Shenzhen Kaimingyang Technology Co., Ltd.
KMY (SZ KMY Co., Ltd) waa soo saare caalami ah oo horseed u ah kiishka is-u adeega, teebabka biraha, iyo POS. Shirkaddu waxay ku taal Shenzhen, Shiinaha, magaalo xeebeed qurux badan, taas oo ah aagga ugu horumarsan uguna casrisan teknoolojiyadda sare ee Shiinaha, kaliya 45 daqiiqo ayaa laga raacayaa Shenzhen ilaa Hong Kong oo aad ugu habboon wadahadalka ganacsiga caalamiga ah.
Wax soo saarka KMY iyo xalalka ayaa caan ku ah suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee ka badan 40 dal, badiyaa Ameerika, Yurub, Aasiya, Afrika, iyo Bariga Dhexe waxayna ku heleen sumcad xoog leh warshadan. KMY ma aha oo kaliya shirkad faa'iido leh oo leh waxqabad maaliyadeed oo adag iyo socodsiin lacageed oo xasilloon, laakiin sidoo kale waa shirkad leh awood sii kordheysa iyo rajo. Horey u fiirinta, KMY waxay qeexaysaa hadafkeeda istiraatiijiyadeed ee ah "noqoshada hogaamiye caalami ah oo adduunka isxilqaan isla markaana lagu gaaro isbadalka boodboodka heer sare ilaa heer sare." ma dayi doonto dadaal kasta oo lagu hagaajinayo tartankiisa iyadoo la fulinayo fikradda horumarinta sayniska.
Kooxda KMYâ is s waa kooxdayada kartida u leh. Waan ognahay in dhammaan badeecooyinka iyo adeegyaduba tayada ay ka yimaadeen koox damiir leh oo xamaasad leh. Shaqaalaha indheer garadka ah iyo in ka badan 75% shaqaalaha teknolojiyada injineernimada waxay leeyihiin ugu yaraan 10 sano oo waayo-aragnimo ah soosaarka dukaanada, soo saarista tikniyoolajiyadda iyo baaritaanka boosteejooyinka is-adeegga.
Caqiidadeena ayaa ah â € œShaqo la’aan, wada shaqeyn kooxeed, hal-abuurnimo iyo joogtaynâ € waa sababaha KMY ku sii hayn doona koritaanka xasiloonida iyo caafimaadka leh isla markaana siin doona adeegyo ka sii wanaagsan macaamiisheenna.
kiisaska is-u adeegsiga, teebabka biraha, iyo POS.